Union Minister U Kyaw Tin receives Russian Deputy Chairman of the International Affairs Committee – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tin receives Russian Deputy Chairman of the International Affairs Committee
U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of the Republic of the Union of Myanmar, received the delegation led by Mr. Aleksei Chepa, Deputy Chairman of the International Affairs Committee of the State Duma of the Russian Federation, at 1pm. yesterday, at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw. During the meeting, they cordially discussed matters pertaining to the promotion of bilateral relations and cooperation between Myanmar and Russia as well as to the enhancing of friendship, cooperation and exchange of visits between the two Parliaments.
Dated: 26 July 2018
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ Mr. Alexei Chepa ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်၊ ၁၃:ဝ၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်များအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အပြန်အလှန်လည်ပတ်မှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်